Ny fampirafesana ny fahitalavitra sy ny Internet | Martech Zone
Talata, Septambra 6, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Na dia somary mifandray aza ny GoogleTV sy ny AppleTV, dia toa ireny tranonkala ireny no tena namboarina ho tranonkala hijerena fahitalavitra. Mahita fandrosoana eo amin'ny teknolojia izahay - jereo ny LG Pentouch (doka ity). Enga anie ka nahita ny 60 ″ LG Pentouch Plasma alohan'ny fividianana ny televizionay LCD TV:
Ankoatry ny fanovana ny fomba fampiasantsika ny efijery lehibe any am-piasana dia mampanontany tena ahy ihany koa ny fomba fifandraisan'ny mpanao dokambarotra ao an-trano. Fotoana fohy monja izao dia mino aho fa hahita sosona mavitrika amin'ny seho sy dokambarotra hamelana ny fifampiraharahana… na dia hatramin'ny antso sy fibaikoana mivantana avy amin'ny dokambarotra aza!
Ny mpampiasa dia afaka mampihetsika ny maody Pentouch amin'ny tsindry tokana amin'ny fanaraha-maso lavitra. Amin'ny maody Pentouch, ny mpampiasa dia afaka miditra amin'ny fisie (toy ny PowerPoints) sy ny atiny hafa avy amin'ny PC, ary miasa aminy, manitsy azy ireo na mamindra azy ireo manodidina ny efijery miaraka amin'ny faran'izay tsotra. Ny fahitalavitra dia manohana ny fampiasana penina roa miaraka, ary ny bateria penina dia azo averina alefa amin'ny alàlan'ny port USB ao ambadiky ny vata fahitalavitra.
Amin'ny fampiasana rindrambaiko fahitalavitra an'ny fahitalavitra, afaka misarika sary mivantana eo amin'ny efijery ireo mpampiasa ary avy eo mitahiry ireo rakitra ho fanovana bebe kokoa na fanodinkodinam-bokatra. Raha mifandray amin'ny mpanonta ny PC, afaka manonta ny zavak'izy ireo Pentouch koa ny mpampiasa. Ny fisongadinana rindrambaiko sarotra kokoa dia misy ny Gallery, izay misy fampisehoana slide-built in, Family Calendar ary Digital Photo Frame, izay ahafahan'ny mpampiasa manaingo ny asany amin'ny alàlan'ny safidiny. Ny TV Pentouch koa dia mifamatotra amin'ny Internet, mamela ny fampiharana misimisy kokoa alaina araka izay tiana.
Ny Pentouch TV dia mampiasa efijery fitaratra tsy misy fiarovana, ary koa ny fitenenana RGB ary ny famirapiratana azo antoka ho an'ny sary crisper. Ny fampiononana amin'ny maso dia mihamitombo kokoa amin'ny alàlan'ny fifehezana ny fihenan'ny fiara sy ny teknolojia fananganana loko. Mifanaraka amin'ny volavola TruSlim Frame vita kanto an'ny unit, ny Pentouch TV dia mampiasa fijoroana izay namboarina manokana mba hahazoana antoka fa tsy hipaka tampoka ny fahitalavitra rehefa mampiasa ny fampiasa Pentouch ny tompony.